Aiza no hipetrahana eny amin'ny arabe any Minneapolis
Etazonia Minnesota Minneapolis-St Paul
Ny toeram-pisakafoanana tsara indrindra hihinam-bary any Minneapolis
Ireo mpitsidika any Minneapolis dia mety hahafantatra ny fahatsiarovan-tenan'i Nicollet avy amin'ny toerana malaza amin'ny marika fisokafan'i Mary Tyler Moore Show, fa ny mponina kosa dia fantatra kokoa amin'ny Eat Street. An-jatony amin'ireo toeram-pisakafoanana sy trano fisakafoanana ary trano fisakafoanana an-kibon'ny tany no misy ny tsangambato miolikolika miolikolika ao Nicollet atsimon'ity afovoan-tanàna ity, izay manome ny anaram-bosiny. Ity drafitra ho an'ny daholobe ity dia natsangana tamin'ny faramparan'ny taon-jato faha-90 ary ampahany amin'ny fahasamihafàn'ny tanàna manankarena. Misionera efa hatry ny ela no nanangana fivarotana miaraka amin'ireo transplants sy mpifindra monina mba hanolotra ny zavatra izay azo antsoina hoe tsotsotra indrindra ao an-tanàna. Ary miaraka amin'ny orinasan-teonan'ny ankizy ao amin'ny Minneapolis Institute of Art, ary ny tohodranon'ny Jungle izay manodidina azy, koa dia toeran'ny kolontsaina manan-danja izay mendrika ny fitsidihana. Jereo ny tsara indrindra Eat Street tsy maintsy atolotra amin'ny famelezana ireo trano dimy ireo.
Masoandro Street Breads
Kati Alarcón / Courtesy of Sun Street Breeds
Ny fifidianana ny ankamantatra ankafizin-tsakafo ao Eat Street dia fihinànana mahery, fa ny Sun Street Breads kosa dia mpiloka. Ity fivarotana kafe sy kafe ity dia mety tsara fantatra ho an'ireo afovoan-tanàna: siramamy vita amin'ny ravina katsaka izay, eny, dia toy ny any an-danitra rehefa mandre izy ireo. Saika ny zava-drehetra dia vita avy amin'ny tabataba ao an-trano ary matetika miaraka amin'ny fitaovana ao an-toerana. Mpanorina sy loham-bokatra, Solveig Tofte dia mirehareha amin'ny fampiasana fitaovana sy teknika maoderina hanovana ny fomba mahazatra nentim-paharazana.
Ny Sun Street Breads dia voalohany indrindra sy toerana iray isa-maraina. Ny sakafo maraina dia misy tara isan'andro - toy ny ao, tsara amin'ny sakafo antoandro - mba hahafahanao manamboatra fito andro isan-kerinandro. Ny fivarotana ihany no misokatra amin'ny hariva amin'ny alina alina isan-kerinandro amin'ny alakamisy pizza alina.
Pro-tip: Ataovy azo antoka ny hitondra mofo aminao miaraka aminao eny an-dàlana avy ao amin'ny cafe. Ny mofo fihinanan-kanina, indrindra indrindra, dia tsara ho an'ny ray aman-dreny izay maniry mafy zavatra mahatsikaiky, ary koa ireo ankizy izay mety mitokona ny orony amin'ny alalan'ny mofo mafana. Vokatry ny hena vita amin'ny varimbazaha sy lafarinina varimbazaha iray manontolo, dia malefaka ho malefaka, mamy ho an'ny tovovavy tanora, ary mahasoa ho an'ny ray aman-dreny be fangatahana. Hanome fanafody maranitra maromaro sy jelly ny fividianana fambolena maro.
Ho an'ny alika mafana miaraka amin'ny asiana tavy Aziatika-dia mamaky izany ianao fa tsy tsara lavitra noho i Kyatchi. Ny mpilalao baolina lavalava lava sy ny trano fandraisam-bahiny tranon'ny Hide Tozawa dia nahazatra ny nandrafetana ny mpilalao Twins teo aloha Tsuyoshi Nishioka, noho izany dia mampihetsi-po tokoa ny jiro Japoney amin'ny Dome Dog. Nivangongo ambony ireo frantsy niaraka tamin'ny tsaramaso mofomamy shishito, akondro mena ary soda nodla, ary avy eo dia nipoaka tamin'ny may yuzu-laced mayo. Fiorenan'ny sakafo amin'ny tsara indrindra izany.
Ny alika mafana kosa, raha ny marina, dia miresaka raha oharina amin'ny toeram-pisakafoanana sy ny sushi any an-toerana. Ny sakafo dia manasongadina karazana rolls, nigiri, sy sashimi, ary koa vilia baolina sy skewers. Ny trondro rehetra sy ny sakafo hafa rehetra izay miasa ao Kyatchi dia maharitra hatrany ary matetika no voaray. Ny vokatra dia sakafo vaovao voaomana tsara afaka mahatsapa tsara ny fihinanana.
Pro-tip: Mamakia dikan-tsakafo Donna's ho an'ny tsindrin-tsakafo manokana. Manana safidy ny mahazo azy miaraka amin'ny sôkôlà na miso karamel, fa mahazo tombony ianao ary mandehana ho an'ny miso. Tena mahafinaritra izany.
Miaraka amin'ny fofom-bozaka fanangonam-bozaka atsimo miaraka amin'ny elatra Eoropeana, ny Corner Table dia toerana mahafinaritra ho an'ny fitsaboana na ny daty alina. Ny kalitao, ny vidiny, ary ny bika aman'endriny dia manome toerana ho an'io toerana io, nefa tsy mena. Ary ny toeram-pitsaboana dia mahatonga anao ho hendry sy hendry ao an-trano. Ny sakafo eto dia mipoitra manerana ny tany sy ny vanim-potoana, ary misy foana ny zava-baovao hanandramana.
Ary manandrana anao. Ny menio dia ahitana menasary roa samihafa ary sakafo vitsivitsy maranitra. Ny menaka prix dia ahafahanao misafidy ny sakafo ho an'ny tsirairay. Fa raha tena te-hivoaka ny rehetra ianao, mandamina ny sakafo fanandramana 10-seminera ho an'ny latabatra manontolo miaraka amin'ny divay. Ny divay dia mitondra ny tsirony ao amin'ny lovia, ary mety hahagaga anao ny sasany amin'ireo tsikombakomba. Na inona na inona ataonao, na izany aza, aoka ho azo antoka ny manandrana ny donuts dia mamy. Tian'izy ireo mpitsidika matetika izy ireo.
Pro-tip: Raha tadiavinao ny kalitao tsy misy ny vidiny ambony, Andramo ny Tranom-bokatra mandritra ny Minneapolis 'Restaurant Week amin'ny vidiny mitovy amin'ny vidin'ny vidiny.
Ity trano fisakafoanana haingam-pandeha akaikin'ny Minneapolis College of Art and Design ity no tena fiovana. Ny akoho mpihaza dia natono nandritra ny 24 ora manontolo, ary asehony izany. Vizana ireo zavamanitra, ary ny hena dia mamy sy malefaka. Maro amin'ny lovia no ampiasaina miaraka amin'ny voninkazo mamy sy ny mavo. Ho an'ny mahasamihafa an'i Karaiba, mandrama Ting, Jamaikana pop iray izay manandrana toy ny grapefruit.
Ny fampitandremana marina, ireo zava-manitra ao amin'ny sakafo eto dia manangom-bokatra vaovao tsy mety miandry. Raha manana fandeferana ambany ho an'ny sakafo matavy ianao, alamino ny lovia miaraka amin'ny andaniny amboarina mba hanampy amin'ny famerenana hiverina ny hafanana.
Ny Henintsoa Copper
Io kafe mpamboly sy chic io dia mamorona ny fakan'ny fambolena any Minnesota amin'ny alàlan'ny trano fonenana an-tanindrazana. Fantatra tsara indrindra ho an'ny brunch, ny biskits eto dia avy amin'ny scratch, ny ampahany lehibe, ary ny mimosas tsy manam-petra. Ny divay dia asiana bara-mason-tsakafo, ary ny felam-boninkazo dia hahatsapa ho toy ny nandehananao tao amin'ny efitranon'ny renibeny. Tena voninahitra izany.
Nefa ity toerana ity dia tsy tsara loatra amin'ny sakafo maraina. Ny vorondolo alina dia afaka mihodina amin'ny hariva amin'ny ora sambatra raha toa ka $ 3 fotsiny ny divay, ary $ 5 ny cocktails. Raha mahatsikaiky kely ianao dia manolotra sakafo matsiro sy soso-tsakafo mahavoky ny sakafo ny soso-kevitra mahasalama, sy ny atody lava ary ny $ 2 homemade branche izay tsy eto amin'ity izao tontolo izao ity.
Tahaka ny ankamaroan'ny toerana ambony ao amin'ny Eat Street, ny ankamaroan'ny sakafo dia azo ampiasaina ao an-toerana ary avy amin'ny tranokala maimai-poana. Raha tianao ny zavatra ezahanao, alaivo ny Copper Hen Cookbook ary manandrana ny tananao any an-trano.
Skiing and Snowboard Shops in Minneapolis and St.Paul
Aiza ho aiza no handehanana fiara lehibe Java ao St. Paul, Minnesota?
Frank Lloyd Wright Houses tany Minneapolis, St. Paul, ary Minnesota
Renirano renirano akaikin'i Minneapolis
Ny tantaram-piainana nentim-paharazana, Romantic Valentine's Day Ny zavatra atao any Minneapolis sy St. Paul
Cooper-Young District District
Kalifornia tamin'ny Novambra
Mandeha any amin'ny National Mall amin'ny faha-14 Jolay
Ny toerana mahafinaritra indrindra hitsidihana an'i Chili
5 Toerana tsara indrindra ho an'ny Chocolate Hot in Paris
Au Lapin Agile Cabaret any Paris
Ny fanjakana tsara indrindra sy ratsy indrindra ho an'ny vehivavy tsara
Taridalana ho an'ny mpanjifan'ny British Columbia
Ara-kolotsaina Frantsay sy fanontaniana tokony hampiasaina amin'ny fialan-tsasatra
Torohevitra momba ny fiara fitaterana alina any Azia
Brunch any Mothers Day any Washington, DC
Ahoana no hialana amin'ny Barcelone ka hatrany Maraoka